२०७७ असोज २६, सोमबार | eAdarsha.com
२०७७ असोज २६, सोमबार
शारीरिक कमजोरीको अनुभूति हुनेछ । टाढाको यात्रा शुभ देखिन्न । घरायसी समस्याले गर्दा कार्य गर्ने वातावरण बन्ने छैन । कार्य क्षेत्रमा विभिन्न समस्या आइ लाग्ने छन् । झन्झटिला कार्यको नेतृत्व गर्नु पर्नेछ ।
श्रमको सही मूल्यांकन मिल्दा कार्य गर्न मन लाग्नेछ । सामाजिक कार्यबाट सम्मान मिल्नेछ । राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्नेका लागि सम्मान एवं नयाँ अवसर मिल्नेछ । साथीभाइको सहयोगले कार्यहरु बन्नेछन् ।
अल्छि गर्नाले पछि परिन सक्छ, अल्लि जागरुक हुनुहोला । विना तयारी कार्यमा लाग्दा अन्योलता छाउनेछ । व्यर्थको कार्यमा समय वित्नेछ भने महत्वपूर्ण कार्यले भने विराम लिनेछ । नयाँ योजना शुभ देखिँदैन ।
शुभ कार्यको आरम्भ गर्नाले धेरैको साथ सहयोग मिल्नेछ । खुसीयाली छाउनेछ । मनमा शान्तिको अनुभूति हुनेछ भने शारीरिक स्फूर्ति रहनेछ । आकस्मिक रमाइलो यात्रा हुनेछ । ठूला व्यक्तिको सहयोग पाइनेछ ।
अरुको उक्साहटमा खर्च गरिनेछ । काम गरेर जस भन्दा अपजस व्यहोर्नु पर्ने देखिन्छ । नेतृत्व गणसँग मनमुटाव हुनेछ । सामान्य कार्य समेत सफल बन्न ढिला सुस्ति हुनेछ । अनावश्यक कार्यमा समय वित्नेछ ।
नयाँ कार्यको थालनी गर्ने समय रहेको छ । सामान्य कार्यमा नभुल्नु होला । आयमूलक कार्यमा ध्यान जानेछ । आत्मबल आत्मविश्वासमा कमी आउने छ्रैन । साझेदारी कार्यबाट उचित प्रकारको लाभ मिल्नेछ ।
दिन शुभ रहेको छ । थालेका अधिक कार्यले उचित स्थान पाउने छन् । स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । अध्ययनमा रुचि जाग्नेछ । मिहिनेतको उचित रुपमा कदर हुनेछ । नोकरीमा प्रशंसा मिल्नेछ । समर्थकहरु थपिने छन् ।
सामान्य समस्या सृजना हुन सक्छ, दत्तचित्त भएर लाग्नुहोस् जीत आफै पोल्टामा पर्नेछ । धार्मिक कृत्यमा रुचि रहनेछ । परोपकारी कार्यमा सहभागी हुन पाउँदा खुसी लाग्नेछ । आर्थिक पक्ष मध्यपप्रद रहनेछ ।
मनमा शंका उपशंका उब्जनेछ । ठूलो लगानि नगर्नु नै उचित हुनेछ । शारीरिक आलस्यताले सताउनेछ । अवसर हुँदाहुँदै पनि विकल्पको बाटो रोज्नाले समस्यामा परिनेछ । विवादित कार्यमा सहभागी भइने छ ।
दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार हुनेछ । आर्थिक पक्षमा समेत सुधारको संकेत देखिन्छ । मान, इज्जत, प्रतिष्ठा कमाउने समय रहेको छ । सम्मानजनक कार्यको नेतृत्व मिल्नेछ । मन मिल्ने व्यक्तिसँगको रमाइलो पल वित्नेछ ।
रोकिएका वित्तिय कारोवारलाई प्रयत्न गर्दा सूचारु गर्न सकिनेछ । खुसीयालीपन रहने छ । विपक्षीलाई समेत मेलमिलापको वातावरणद्वारा मिलाएर अघि बढ्न सकिनेछ । आकस्मिक आर्थिक लाभ मिल्ने समय रहेको छ ।
सामान्य अन्योलको वातावरण बन्न सक्छ, पूर्व योजना बनाएर कार्य गर्नु शुभ हुनेछ । नयाँ वस्तुको उपभोग गर्न पाइने छ । आफन्तजनसँगको रमाइलो भेटघाट हुनेछ । सृजनात्मक कार्यमा मन जानेछ ।
वि.सं. २०७७ साल असोज २६ गते सोमबार, तदनुसार ई.सं. २०२० अक्टोबर १२ तारिख, प्रमादीनाम संवत्सर, श्रीसूर्यदक्षिणायन, शरदऋतु, चान्द्रमान अनुसार अधिक आश्विनकृष्णपक्षको दशमी तिथि पूर्वान्ह ११ः२२ बजेसम्म, त्यसपछि एकादशी तिथि रहनेछ ।
नक्षत्र अश्लेषा वेलुका ८ः५१ बजेसम्म, त्यसपछि मघा रहनेछ ।
विष्कुंभादी योग साध्य वेलुका ६ः०५ बजेसम्म, त्यसपछि शुभ रहनेछ ।
आनन्दादी योग सौम्य ।
करण बव रात्रि १०ः४६ बजेसम्म, त्यसपछि कौलव रहनेछ ।
श्रीसूर्य कन्या राशिमा, चन्द्रमा : कर्कट राशिमा वेलुका ८ः५१ बजेसम्म रहनेछ ।
सूर्योदय ६ः०३ बजे, सूर्यास्त: बेलुका ५ः३६ बजे ।